आउँदै छ २०२० निसान किक्स बीएस ६, के छ विशेषता ? - Arthapage
आउँदै छ २०२० निसान किक्स बीएस ६, के छ विशेषता ?
२०२० निसान किक्स लगभग पुरानो मोडल जस्तै देखिनेछ, तर सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन यसको इन्जिनमा गरिएको छ । निसानले नयाँ इन्जिन बीएस ६ एमिसन नर्म्स अनुरुप नगरी नयाँ र अधिक शक्तिशाली इन्जिन समावेश गरेको छ ।
रिपोर्ट अनुसार २०२० निसान किक्स टर्बोमा यस्तो विशेषता छ जसले यसलाई अन्य कार भन्दा भिन्न बनाउँछ ।
२०२० निसान किक्समा कम्पनीले निसानको टर्बो इन्जिन दिएको छ र यो उही इन्जिन हो जुन २०२० अटो एक्सपोमा रेनो डस्टरमा पेश गरिएको थियो । सो इन्जिन १.३ लिटर फोर सिलिन्डर, टर्बो चार्ज पेट्रोल इन्जिन रहेको छ । जसले १५४ बीएचपी पावर र २५४ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । इन्जिनमा कम्पनीले सिलिन्डर कोटिङ टेक्नोलोजी दिएको छ । ताकि यसले अझ बढी माइलेज दिन सकोस् । सो इन्जिनमा ६ स्पिड म्यानुअल गियरबक्स रहेको छ । साथै यसमा एक्स ट्रोनिक सीभीटी गियरबक्सको विकल्प पनि रहेको छ ।
स्ट्यान्डर्ड फिचरको रुपमा निसान किक्समा निसान कनेक्टको साथमा स्मार्ट वाच कनेक्टिभिटी, अटो एसीको साथमा एसी भेन्ट, कुल्ड ग्लोब बक्स, निसानको ट्वीन पार्सेल शेल्फ, ड्युअल एयरब्याग, एबीएस प्लस ईबीडी, ब्रेक असिस्ट फिचर र इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर, इम्प्याक्ट सेन्सिङ अटो डोर अनलक, स्पिड सेन्सिङ अटो डोर अनलक र सार्क फिन एन्टेना जस्ता फिचर रहेको छ ।
साथै नयाँ किक्समा ८.० इन्च टचस्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टमको साथमा एप्पल कारप्ले, एन्ड्रोइड अटो र ३६० डिग्री क्यामेरा भ्यु समावेश गरेको छ । यसमा कम्पनीले अटोमेटिक भेरिएन्टमा फिचरको रुपमा फस्र्ट इन सेगमेन्ट रिमोट इन्जिन स्टार्ट सिस्टम पनि समावेश गरेको छ ।
निसान किक्समा ६ मोनोटोन कलर विकल्प ब्लेड सिल्भर, नाइट शेड, ब्रोज ग्रे, फायर रेड पर्ल ह्वाइट, डिप ब्लु पर्ल र ३ ड्युअल रहेको छ । टोन कलरमा ब्रोन्ज ग्रेको साथमा एम्बर ओरेन्ज, फायर रेडको साथमा अनिक्स ब्ल्याक र पर्ल ह्वाइटको साथमा अनिक्स ब्ल्याक समावेश गरेको छ ।
भारतीय बजारमा निसान किक्स ४ भेरिएन्ट एक्सएल, एक्सभी, एक्सभी प्रिमियम र एक्सभी प्रिमियम ओ रहेको छ । नयाँ निसान किक्स पेट्रोल मोडलमा मात्र उपलब्ध हुनेछ । कम्पनीले यसमा १.५ लिटर डिजेल इन्जिन बीएस ६ मानक अनुरुप अपग्रेड गर्ने छैन ।
प्रकाशित मितिः 8:31:02 AM |
Prev२ सय ४३ पुगे देशभर कोरोना संक्रमित, आजै थपिए २४ जना
Nextअबको प्राथमिकता कृषी उत्पादन, तर कसरी गर्ने ?